Hevitra MPANOHARIANA | Aogositra 2021 |
2021-08-20 @ 23:46 in Toekarena
Tsy hiditra any amin'ny fanjanahantany aho fa izay hatramin'ny nahazoana ny fahaleovantena ihany no raisiko. Hevitro ihany no mivoaka eto ka azon'ny mpamaky lavina. Asaina koa ny mpamaky hamakafaka raha mba mitombina sy azo raisina ihany ny zava-boasoratra eto.
Fahadisoana voalohany ny fanesorana ny karatra isan-dahy. Tsy maintsy mandoa karatra avokoa, izany hoe tsy maintsy mandoa hetra avokoa ny lehilahy rehetra tamin'izany fotoana izany, satria ny lehilahy no miasa sy mihary ao amin'ny ankohonana. Tsy maintsy aloa izany satria izay ihany koa ny ikarakarana ny sosialin'ny olona ary nahafahana nanaovana maimaimpoana ny fitsaboana sy ny fampianarana hatrany amin'ny tanàna kely lavitra andriana any.
Naninona no nesorina ny karatra isan-dahy? Tsy ampela-tanana ny lahatahiry fa izay sendra voavaky tamin'ny ranty na boky ihany no nahafahana nakana tsoa-kevitra. Satria tamin'ny voalohany dia isan'olona lehilahy no nampandoavan-ketra ary azo savaina mihitsy ny olona miakatra an-tanàna raha nahaloa ny hetrany... dia iny koa no nahatonga ny anarany ho karatra isan-dahy.
Misy anefa ny olona tsy mihevitra ny hiakatra an-tanandehibe ka tsy manahy ny ho voasava karatra, maro amin'ny Malagasy ihany koa no mametraka ny harenany amin'ny biby fiompy ka ny malaza indrindra amin'izany dia ny omby. Tsy maintsy mitady vola hampiodinana ny raharaham-panjakana anefa ny fitondram-panjakana dia nisy ny nahita hevitra hoe maninona ihany koa raha asiana hetra ny isan'omby? Izany hoe hetra miankina amin'ny haren'ilay olona io. Ny fahazoako ny tantara no nahafahana nihevitra fa tsy nanaiky io fampidirana hetra miankina amin'ny harena io ny mpiompy ary voalohan-daharana amin'izany ny any atsimon'i Madagasikara. Izay ihany koa no nikomian'ny olona tany niaraka tamin'ny MONIMA nahatonga ny Avrily 1971.
Rehefa nandray ny fitondrana ny Jly Ramanantsoa ka ho fakana ny fon'ny olona dia ny "karatra isan-dahy" no nofoanany voalohany indrindra. Noho ny fakàna ny fon'ny olona dia ny fidiram-bolan'ny faritany (mbola province no niantsoana azy tamin'izany) natao hikarakarana ny vahoaka no nesorina. Io ilay fahadisoana voalohany. Fomba ahoana no ahazoana mampihodina ny raharaham-panjakana nefa nofoanana ny fidiram-bola ho amin'izany?
Koa fepetra voalohany mba hahatonga ny olona ho tompon'andraikitra tsy maintsy manana adidy eo amin'ny firenena dia ny famerenana io karatra io ka tsy isan-dahy intsony fa isaky ny olon-dehibe na efa nisazy na tsia. Toy ny karatra miaraka amin'ny kara-panondro. Tsy mahazo miditra tanandehibe, tsy mahazo mivezivezy eo an-tanandehibe rehefa tsy nandoa hetra sy tsy manana ny karatra entina manaporofo izany. Mazava loatra fa ny mpiasa amin'ny orinasa dia ny orinasany no mikarakara ny karatry ny mpiasa ao aminy, mahalala ny IRSA, ary amin'izay fotoana izay ny mpiasa tena mahatsapa fa voaloa tokoa ny IRSA rehefa mahazo ny karany izy fa tsy zary soratana eo amin'ny taratasin-karama fotsiny.
Miharihary ny voka-dratsin'ny fanafoanana ny karatra isan-dahy. Anisan'ny mahery indrindra dia ny fiheverana fa afa-tsy mandoa hetra rehefa "kely karama", na misy toe-tsaina hoe tsy tokony handoa hetra satria kely ny vola miditra amiko. Izaho manao hoe na iza na iza, tsy misy anavahana, rehefa amin'ny fotoana tokony hiasany dia mila mandoa ny hetrany. Na dia ny mpianatra eny amin'ny Anjerimanontolo aza dia mila mandoa na dia mety hisy fampihenana aza rehefa mitozo amin'ny fianarana sy afaka fanadinana fiakaran-dingana ianarana, fa mitovy amin'ny olon-kafa rehetra raha vao tsy afaka fanadinana fiakaran-kilasy.
Miala ho azy amin'izay fotoana izay ny kivelombelona sy ny katsentsitra fotsiny satria ireny indrindra no maha-borona ny firenena.
Manaraka izany, efa misy ny hetra alaina amin'ny trano fa ilaina ihany koa ny fisian'ny hetra alaina amin'ny fiara (na miasa na tsy miasa), hetra amin'ny maha-harena lehibe azy fa tsy amin'ny maha-miasa na tsia azy. Io fiantohana amin'ny fiara rehetra io tokony ho fidiram-bolam-panjakana fa tsy fidiram-bolan'orinasa tsy miankina mahatonga ny fitenenana hoe "vol autorisé" (halatra nahazoana alalana). Amin'izay fotoana izay tsy "assurance" intsony no takiana miaraka amin'ny taratasin'ny fiara fa ny "hetra" naloa taminy isa-taona, atao arakaraka ny heriny (CV) sy ny haben'ny vesatra zakany (entana sy olona). Dia safidy sisa ny fanaovana na tsia izany "assurrance" izany. Ny nahavariana ahy tamin'ity toe-javatra ity, izay mahatsiaro no mahalala fa nisy hetra nalaina tamin'izany fahitalavitra izany tamin'ny Repoblika faharoa, satria mbola rendrarendra no niheverana azy tamin'izany... fa ny fiara ve tsy nisy hetra rehefa tsy natao itadiavam-bola?
Tsy tokony hahamenatra ihany koa ny fitakiana hetra amin'ny fikambanam-pivavahana na inona na inona ary lafo kokoa izany ho an'izay tsy manana trano raikitra naorina hanaovana izany fivavahana izany, fa tsy manofa aman'olona na orinasa na fikambanana hafa satria misy ny te-hitango vola vetivety fotsiny. Mazava loatra fa tsy maintsy manana fitantanam-bola mangarahara ny fiangonana na fikambanam-pivavahana fa tsy kobokobonina samirery any. Mazava loatra fa raha misy fikambanam-pivavahana iray mijoro eo amin'ny firenena na eo amin'ny faritra (kaominina sy fokontany) dia omena fe-potoana izy amin'ny fananganana trano ivavahany.
Tsy voatery noho izany ny isam-batan'olona, fikambanana, orinasa, sns hitady tombombarotra fa rehefa misy fidiram-bola na dia rakitra aza dia efa andoavan-ketra iny izay. Amin'izay fotoana izay manan-jo ny rehetra hitaky ny tamberin'andraikitra tamin'ny hetra naloany ary tsy maintsy manana kara-ketra avokoa na iza na iza, hatramin'ny fikambanana isan-karazany.
Hevitro iray amin'ity lohahevitra andiany voalohany amin'ireo fahadisoana nampahantra an'i Madagasikara satria ny vola fitady ary herim-po fanary, tsy hisy ny kisangisangy sady efa misy rahateo ny teknolojia (QR Code,...) ahafahana manamarina ny karatra tsirairay. Tsy maintsy hisaina amin'ny maha-olondehibe azy ny olompirenena ka tsy hisy intsony ny hihalangalana amin'ny andraikitra tokony horaisiny.
2021-08-09 @ 21:11 in Ankapobeny
Raha ninia tsy niresaka Apollo 21 ny Filoha Mamim-bahoaka nandritra ny kabariny dia mety ho resy lahatra ihany aho fa tsy sinema ilay zava-nitranga. Fa satria noresahany ilay izy mba hilalaovana ny fihetseham-pon'ny mpihaino dia tohin'ilay "drama" tiana hampiesonana vahoaka ilay izy amiko.
Vao maika indray niampy ireo sioka telo... diso andro... satria mbola tsy nandeha akory ny fotoam-pitsarana dia efa dradradradraina ho fanonganam-panjakana. Tsy misy mpiresaka ny fankalazana ny faharoa taona ny RMDM hotontosaina ao amin'ny Magro Behoririka. Fa any ny saiko raha vao nahita ireo sioka teo aho. Hotontosaina rahampitso manko izany. Izaho manokana tsy mihevitra izany hahazo olona, noho izy ao anaty ora fiasana.
Fa tsy azoko ho'aho ireo antso ataon'ny filoha mamim-bahoaka ireo, vao maika mametraka hoe tena ao anaty krizy mihitsy koa ry zareo raha manao antso tahaka izany. Toa ireny hoe hisy ady hitranga ireny. Sa ve tohin'ilay lazain'ny gazety iray fa fandroahana tsy nisy hatak'andro ny mpanolo-tsaina voalohany amin'ny Kaonsilà Jeneralin'i Frantsa ilay izy?
Ireo sioka telo
1/3 Je condamne avec fermeté tous les agissements qui portent atteinte à la sureté de l’État et la tentative de coup d’État qui a été préparée depuis des mois à #Madagascar.
Notre pays a besoin de paix et de stabilité pour avancer et se développer.
3/3 Nous avons confiance dans notre justice. Les investigations sur ces faits graves sont en cours. Elles doivent se faire avec sérénité et en toute indépendance.
Izaho kosa raha manao antso, dia hoe ampitao mivantana amin'ny fahitalavitra sy ny radiom-panjakana TVM/RNM ny fotoam-pitsarana mha hahitan'ny olona ny fandehan'izany fitsarana izany ary mba hitandrina ihany koa ny mpitsara fa tsy hoe atao any amin'ny takona dia manao didim-pitsarana baikon'ny mpanatanteraka.Efa nampiharina teto Madagasikara ny toa izany tamin'ny Repoblika faharoa dia mba ilaina ampiharina hany koa.
2021-08-06 @ 21:49 in Ankapobeny
Nalaza tao amin'ny tambajotra sosialy ny fampitandremana fa mety hampigadra hatramin'ny roa taona ny fanaovana varotra anjotra. Tsy mino izany filazana lazaina fa avy amin'ny tale jeneralin'ny hetra izany aho. Angamba ny marina kokoa dia hoe tokony handoa hetra rehefa mivarotra entana. Fa dia lasa indray ny soratro momba ity famorian-ketra ity. Heveriko manokana fa misy zavatra tsy milamina amin'ity sehatra iray ity.
Tokony hampieritreritra ny ao amin'ny famorian-ketra ny hoe maninona rehefa manao fanentanana midina ifotony amin'ny fampidirana ireo tsy mpandoa hetra mba ho mpandoa hetra no ilaharam-be sy mameno kianja ny olona fa maninona rehefa amin'ilay telovolana voalohany amin'ny taona iny amin'izay no tsy hita avokoa ny ankamaroan'ireo olona nokendrena hampidirina.
Nahoana indray etsy ankilan'izany dradradradraina ho zara raha folo isanjato ny "pression fiscale" eto Madagasikara? Tsy midika ve izany fa tsy zakan'ny olona ny hetra teneninareo fa tsy raharahanareo izay fitarainan'ny olona. Nahoana no mahazaka olona an'aliny amin'ny fanentanana sy ny vola kely 16.000 ariary fa ahiako tsy mahazo zato rehefa manomboka amin'ilay 150.000 ariary amin'ny "impots synthetiques (IS)". Moa ve tsy midika izany fa ny politika fampidiran-kevitra mihitsy no tsy mety eto Madagasikara? Toa iniana atao izay tsy hampazoto ny olona amin'ny sehatra ara-dalàna?
Tsy mbola nisy namaly teto mihitsy ny avy amin'ny solontenan'ny mpamory hetra hoe raha maka ohatra amin'ny varotra fahana amin'ny finday aho, efajato ariary ny tombony omen'ireo mpanome tolotra antso goavana eto Madagasikara ho an'ny mpaninjara azy mividy iray alina ariary, nefa ny IS mampametraka fa amin'ny varotra zavatra mitentina iray alina ariary dia dimanjato ariary no alain'ny fanjakana? Nahoana no terena handainga izay mivarotra "crédits" raha mbola te-hivarotra izany izy?
Sao mila amboarina ity politikam-pamorianketra ity fa mampandositra ny olona tsy ho ao amin'ny ara-dalàna satria feran'ny orinasa goavana ny vidin'entany nefa ataony latsaka ny dimy isanjato (ny an'ny crédits) ny tombony ho an'ny mpaninjara? Aleo ve avela handositra ireo tokony handoa hetra aman'aliny (fa tsy hoe iray alina monja) fa ny zato azo avy ao no atao mangana raha te-hahazo vola ny fanjakana? Amin'izay mbola mampieritreritra fa toa tsy miverina araka ny tokony ho izy amin'izay mpandoa hetra ny tamberin'izany avy eo. Toa ratsy hatrany ny lalana? toa tsy olona no iheveran'ny mpiasam-panjakana ireo olon-tsotra amin'ny kitakita mahazo azy? toa tsy mandeha amin'izay laoniny mihitsy ny fiainana ankapobeny eto Madagasikara e?
Ohatra iray faran'izay vendrana no apetrako eto, mba tsy ilazana hoe tsotra ilay vendrana lazaiko. Raha nahazo olona iray alina monja (fa tsy miteny aho hoe roa na telo alina na dia mihoatra be aza no nanao izany tanatin'ny roa taona) ilay fidinana ifotony faramparan'ny taona ka mandoa 16.000 ariary ireo dia mahazo 160.000.000 ariary izany ny famorian-ketra. Nefa avy eo zato ny olona azo manohy amin'ny telovolana voalohany dia raisina ilay 150.000 ariary raha manao sehatra liberaly dia ny totalin'izany avy eo 15.000.000 ariary izany hoe tsy ampy ampahafolon'ny tamin'ny fanentanana volana vitsivitsy teo aloha. Raha mitohy anefa io avy eo lasa any amin'ny 600.000 ariary na lasa an-tapitrisany mihitsy no aloan'ilay olona amin'ny taona manaraka... famonoana azy ny dikan'izany ho an'ilay olona, indrindra rehefa tsy misy ny tamberina ho azy avy amin'ny fanjakana. Aza atao mahagaga ihany koa avy eo raha folo isanjato ny "pression fiscale"